Kuuriyada Waqooyi oo sheegtay in ay Maraykanka duqayn karto | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Kuuriyada Waqooyi oo sheegtay in ay Maraykanka duqayn karto
Madaxwaynaha dalka Maraykanka Donate Trump (Biddix) Dhexda Olalka Qaraxa Nuyukleerka, Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un (Middig) Xuquuqda Sawirka GOOGLE
Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in ay ku guulaysatay tijaabinta nooc cusub oo ah gantaallada ballistic loo yaqaanno ee qaaradaha isaga kala goosha, kaas oo gaari kara dhammaan qaaradda uu Maraykanku ku yaaallo.
Khubaro ka faalooda arrimaha dalkaasi ayaa sheegay in xukuumadda Pyongyang ay horumarineyso gantaaladeeda, iyadoo uga gol leh inay ku bartilmaameedsato goobaha fog fog sida dalka Mareykanka.
copyrightREUTERS Warbixintan waxaa akhriday weriyaha caanka ka ah Kuuriyada Waqooyi ee Ri Chun Hee
Tani waxaa ay muujineysaa in Kuuriyada Waqooyi ay weli wado tallaabooyin ay ku horumarineyso awoodda gantaaladeeda, iyadoo ay jirto dadaalo lagu cunaqabateynayo dalkaasi, taaso oo uu hormuud ka yahay Mareykanka.
Dhanka kale, tallaabadan ay ku dhaqaaday Kuuriyada Waqooyi ayaa waxaa cambaareeyay dowladda Japan. Ra’iisal wasaaraha dalkaasi Shinzo Abe ayaa markii uu soo baxay warka sheegaya in Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay gantaal shir deg deg ah isugu yeeray golaha wasiirada ee Japan.
Afhayeen u hadlay xukuumadda Tokyo-na waxuu sheegay in tani ay tahay mid aan la aqbali Karin.
Previous articleEUCAP Somalia oo Muqdisho ku qaban qaabisay Siminaar ku saabsan Sharciga Badda
Next articleSacuudi Carabiya: Prince Matib bin Cabdullahi oo la sii daayay